ခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးများ ၀ယ်ယူရန်ခက်ခဲသူတို့ အတွက် ညှင်းပျောက်ကြောင်းဆေးနည်းကောင်းလေး...! - Thadin
HomeHEALTHYခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးများ ၀ယ်ယူရန်ခက်ခဲသူတို့ အတွက် ညှင်းပျောက်ကြောင်းဆေးနည်းကောင်းလေး…!
May 19, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on ခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးများ ၀ယ်ယူရန်ခက်ခဲသူတို့ အတွက် ညှင်းပျောက်ကြောင်းဆေးနည်းကောင်းလေး…!
ညှင်းပျောက်ဆေး နှင့် ဒန့်ကျွဲပင်
လက်တင်ဖြင့် Cassia Toraဟုခေါ်ပါသည်။
လူအတော်များများ အဖြစ်များကြ၏။ဆိုရပါသော် အရေပြားမှိုရောဂါ ဖြစ်သည်။မိမိအသား အရောင်ထက် ပို၍ဖြူနေခြင်း၊ပို၍ရင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်း ပွားလာ တတ်လေသည်။ ရင်းဘတ်၊ ပါးပြင်၊ဂုတ်သား၊ ကျောပြင် ၊လက်မောင်း၊လည်ပင်းနေရာအနှံ့ အကွက်အကွက်များ ပျံ့ပွားနေတတ်သည်။
ယောက်ျား၊မိန်းမတို့ ညှင်းပေါက်၍ အလှပျောက်ပြီး စိတ်ညစ်သူတို့များကြသည်။ရုပ်လေးတော့ချောပါရဲ့ ညှင်း တွေ ပေါက်နေတာဆိုးတယ် ဒီလိုမျိုးပြောတတ်ကြသည် ကိုး..။
ညှင်းရောဂါသည် Mallasseziaဟုခေါ်သောမှို တစ်မျိုး ကြောင့် ဖြစ်ပွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ နာကျင်မျုမရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံယားယံတတ်ပါသည်။
ခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးများ ၀ယ်ယူရန်ခက်ခဲသူတို့ အတွက် ညှင်းကို ပျောက်ကြောင်းဆေးနည်းကောင်းလေးအား တင်ပြပါအံ့…။
ဒန်းကျွဲပင်စေ့ များကို မြေအိုးတွင်မီးကျွမ်းအောင်လှော်ပြီး အမှုန့်ထောင်းပါ။ ထိုဒန့်ကျွဲမှုန့်နှင့်နှမ်းဆီစစ်စစ်လေးအား ရောမွှေပြီး ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း လိမ်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၀)ရက် တိတိဇွဲရှိရှိလေး လိမ်းပေးပါက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ ညှင်းများ ပျောက်ပြီး ပင်ကိုယ်အလှပြန်၍ ရနိုင်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
နှမ်းဆီအခက်တွေ့သူတို့ သံပုရာရည်ဖြင့်လိမ်းပါရန်။ဒန်းကျွဲပင်အား ရွှေမြန်မာတို့အထူးမိတ်ဆက်ရန် မလိုပါ သိပြီးအပင်ဖြစ်ပါသည်။
အစေ့သည်ပူ၍ခါးသက်သောအရသာရှိပါသည်။အရွက်ကို ဟင်းချက်စားခြင်း၊ အစေ့ကို သံပုရာရည်ဖြင့် ကြိတ်ပြီးလိမ်းပါက အရေပြားရောဂါတို့ ပျောက်ပါသည်။
မျက်စိအတွက်အစေ့ကိုသွေး၍ကွင်းခြင်း၊ အစေ့ကို ကျိုပြီးသောက်ပါက မျက်စိပိုးထခြင်း၊ယားခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။
အနာငန်းလိုက်က အစေ့ကို သွေးပြီးလိမ်းခြင်း၊သောက်ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
ညှငျးပြောကျဆေး နှငျ့ ဒနျ့ကြှဲပငျ
လကျတငျဖွငျ့ Cassia Toraဟုချေါပါသညျ။
လူအတျောမြားမြား အဖွဈမြားကွ၏။ဆိုရပါသျော အရပွေားမှိုရောဂါ ဖွဈသညျ။မိမိအသား အရောငျထကျ ပို၍ဖွူနခွေငျး၊ပို၍ရငျ့နခွေငျးဖွဈသညျ။
အခြိနျကွာမွငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ တဖွညျးဖွညျး ပှားလာ တတျလသေညျ။ ရငျးဘတျ၊ ပါးပွငျ၊ဂုတျသား၊ ကြောပွငျ ၊လကျမောငျး၊လညျပငျးနရောအနှံ့ အကှကျအကှကျမြား ပြံ့ပှားနတေတျသညျ။
ယောကျြား၊မိနျးမတို့ ညှငျးပေါကျ၍ အလှပြောကျပွီး စိတျညဈသူတို့မြားကွသညျ။ရုပျလေးတော့ခြောပါရဲ့ ညှငျး တှေ ပေါကျနတောဆိုးတယျ ဒီလိုမြိုးပွောတတျကွသညျ ကိုး..။
ညှငျးရောဂါသညျ Mallasseziaဟုချေါသောမှို တဈမြိုး ကွောငျ့ ဖွဈပှားသညျဟု ဆိုပါသညျ။ နာကငျြမြုမရှိသျောလညျး တဈခါတဈရံယားယံတတျပါသညျ။
ခတျေပျေါဆေးဝါးမြား ဝယျယူရနျခကျခဲသူတို့ အတှကျ ညှငျးကို ပြောကျကွောငျးဆေးနညျးကောငျးလေးအား တငျပွပါအံ့…။
ဒနျးကြှဲပငျစေ့ မြားကို မွအေိုးတှငျမီးကြှမျးအောငျလှျောပွီး အမှုနျ့ထောငျးပါ။ ထိုဒနျ့ကြှဲမှုနျ့နှငျ့နှမျးဆီစဈစဈလေးအား ရောမှပွေီး ညအိပျရာဝငျတိုငျး လိမျးပေးရနျဖွဈပါသညျ။ (၁၀)ရကျ တိတိဇှဲရှိရှိလေး လိမျးပေးပါက ခန်ဓာကိုယျပျေါမှ ညှငျးမြား ပြောကျပွီး ပငျကိုယျအလှပွနျ၍ ရနိုငျပါကွောငျး တငျပွလိုကျပါသညျ။
နှမျးဆီအခကျတှသေူ့တို့ သံပုရာရညျဖွငျ့လိမျးပါရနျ။ဒနျးကြှဲပငျအား ရှမွေနျမာတို့အထူးမိတျဆကျရနျ မလိုပါ သိပွီးအပငျဖွဈပါသညျ။
အစသေ့ညျပူ၍ခါးသကျသောအရသာရှိပါသညျ။အရှကျကို ဟငျးခကျြစားခွငျး၊ အစကေို့ သံပုရာရညျဖွငျ့ ကွိတျပွီးလိမျးပါက အရပွေားရောဂါတို့ ပြောကျပါသညျ။
မကျြစိအတှကျအစကေို့သှေး၍ကှငျးခွငျး၊ အစကေို့ ကြိုပွီးသောကျပါက မကျြစိပိုးထခွငျး၊ယားခွငျးကို သကျသာစပေါသညျ။
အနာငနျးလိုကျက အစကေို့ သှေးပွီးလိမျးခွငျး၊သောကျခွငျးဖွငျ့ ပြောကျကငျးနိုငျပါသညျ။
အလှူရှင်များ သတိထားဖို့ ကော်သပိတ် အန္တရာယ်အကြောင်း…!
This Month : 20048
This Year : 273518
Total Users : 632542
Total views : 2962727